Ahoana ny fomba hiatrehana lolompo amin'ny fifandraisanao: 12 tsy misy toro-hevitra Bullsh * t - Fifandraisana
Ny fitiavana tsapanao taloha ho an'ny vadinao ve efa simba noho ny fisian'ny lolom-po amin'ny fifandraisanareo?
Tsy irery ianao.
Ny lolom-po dia iray amin'ireo fanamby fahita indrindra atrehin'ireo mpivady.
Matetika izy io dia milomano mangingina any aoriana, izay mahatsapa tena amin'ny fanehoan-kevitra mahatsikaiky, ny fisintomana ara-pihetseham-po ary ny fifanolanana ankapobeny eo amin'ny mpiara-miasa.
Raha tezitra amin'ny namanao ianao ary tezitra aminao izy ireo (izay, avelao izy hiatrika azy, angamba izy ireo raha any amin'ny toerana maizina ny fifandraisanareo), inona no azonao atao hanasitranana ny elanelana misy eo aminao alohan'ny hivadika ho chasms?
Izay no hodinihinay ato amin'ity lahatsoratra ity.
famantarana fa tsy mihoatra ny vadiny taloha izy
Fa, voalohany, famaritana.
Inona no atao hoe lolom-po?
Ny lolom-po dia ny fahatsapana marary mahazo olona iray rehefa heverinao fa tsy ara-drariny no nitondrany anao.
Tsy dia mitovy amin'ny hoe tezitra na sosotra rehefa misy olona tena tsy mitondra anao tsara.
Fahadisoam-piheverana misimisy kokoa mifandraika amin'ny fihetsiky ny olona iray hafa, ny teny, na ny zavatra inoan'izy ireo momba zavatra iray aza.
Ny lolom-po dia manana sosona be pitsiny izay mitombo rehefa mandeha ny fotoana.
Ny zavatra ataon'ny olona iray dia mety hahasosotra anao amin'ny voalohany, saingy tsy tezitra amin'izy ireo ianao eo noho eo.
Saingy, rehefa mandeha ny fotoana, ny tranga miverimberina zavatra mitovy, miaraka amin'ny fahasosorana amin'ny zavatra hafa, dia mitambatra amin'ny lolom-po tsapanao ankehitriny.
Inona no miteraka lolompo eo amin'ny mpivady?
Indraindray, fotsiny ny vadinao manao zavatra hafa aminao ary tsy mahatsapa ny filàna manova ny fombany - ary dia tezitra amin'izy ireo ianao amin'izany.
Indraindray dia ny fahatsapanao fa tsy henoina fotsiny ianao na ny vadinao tsy mandray am-pahamatorana ny olanao na ny ahiahyo.
Ny lolom-po dia mety vokatry ny nenina anananao noho ny fiheveranao fa ny vadinao no nahatonga izany - oh. mifindra any amin'ny tanàna vaovao hahafahan'izy ireo manaiky asa vaovao, na TSY manan-janaka hafa satria tsy tian'ny vadinao izany.
Izy io dia mety hitranga eo amin'ireo ray aman-dreny izay tsy ahatsapan'ny renim-pianakaviana ao an-trano fa sarobidy na ankasitrahana izy amin'ny zavatra rehetra ataony.
Mety hitombo amin'ny fifandraisana izay antenain'ny lehilahy ny vehivavy handray ny anjara toeran'ny stereotypical an'ny mpahandro, mpanadio sns.
Matetika, ny lolom-po dia tonga amin'ny tsy fahaiza-mandanjalanja, sady azo ampiharina no mampihetsi-po. Mahatsapa ianao fa toa tsy mitovy ny fizarana andraikitra sy andraikitra. Na mino ianao fa manome fanampiana ara-pihetseham-po bebe kokoa ho an'ny vadinao noho izy ireo manjo anao.
Inona no vokatry ny lolom-po amin'ny fifandraisana?
Na dia fihetseham-po miavaka amin'ny fahatezerana aza ny lolom-po, dia matetika no miseho ho fahatezerana amin'ny fihetsikao sy ny fitsaboana ny vadinao.
Rehefa mahatsikaritra ny tsy rariny na mino ianao fa nanao zavatra izay tsapanao fa tsy nahafa-po anao ny namanao, dia mihatra aminy ianao.
Mampalahelo fa ny olon-tianao kosa dia mety ho sosotra aminao noho izany. Tsy isalasalana fa tsy hahita zavatra hafa izy ireo ary ny fanafihanao azy ireo dia antony iray hahatsapan'izy ireo fa voatsabo tsy ara-drariny.
Ary noho izany dia mipoitra ny fomba fifandonana amin'ny fifandonana satria samy mahatsapa ho voadona amin'ny toerana apetraky ny hafa ianareo.
Vokany iraisana amin'izany ny fisintomana ara-pihetseham-po ny roa tonta amin'ny asa mafy hatoka sy ny fanaovana sabotage samirery.
Sady tsy vonona ny ho voalohany maneho tena fitiavana amin'ny hafa na miala tsiny noho ny tahotra fa maneho ny fanekena ny tsiny.
Ary arakaraka ny faharetan'izany no vao mainka mitombo ny lolom-po.
Ka ahoana ny fomba hiatrehanao ilay lolom-po tsapanao roa mba hamonjy ny fifandraisanareo?
Ireto misy dingana azonao atao na maka.
1. Anontanio raha misy antenaina ny zavatra antenainao amin'ny vadinao.
Tsy misy olona tonga lafatra. Tsy ny vadinao. Tsy ianao.
Mazava ho azy fa tsy misy izany atao hoe ny sipa tonga lafatra, sipa, vady na vady izany.
Mety ho tianao izy ireo mba ho izay rehetra nantenainao sy nofinofisinao, saingy olombelona ihany izy ireo.
Manantena be loatra amin'izy ireo ve ianao?
Miorina amin'ny ampahany ve ny lolom-poo amin'izy ireo amin'ny tsy fahombiazan'izy ireo miaina mifanaraka amin'ilay fahitana anananao momba ny tokony ho mpiara-miasa lehibe?
Angamba izy ireo tsy manao ireo karazana fihetsika romantika ilainao hahatsapanao fa tiana ianao.
Na tsy vitan'izy ireo ny manao ny zavatra rehetra angatahinao hataon'izy ireo satria tsy manam-potoana na tsy mahalala ny fomba izy ireo.
Angamba tsy avo noho ny anao ny fivezivezena ara-nofo.
Indraindray ianao dia mila manaiky fotsiny fa ny vadinao dia tsy hieritreritra na hanao zavatra amin'ny fomba mety indrindra indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Hanao zavatra mandrangitra anao na manafangaro ny helo avy aminao izy ireo. Izany dia teboka fanaintainana tsy azo ihodivirana fotsiny izay tonga rehefa mizara ny fiainany ny olona roa.
2. Anontanio raha mila mamela ny fifehezana ianao.
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny antony iraisana amin'ny lolom-po dia ireo fotoana izay anaovan'ny vadinao zavatra amin'ny fomba hafa tanteraka aminao.
Manana fomba manokana manokana anaovana zavatra ianao - fomba iray inoanao fa tsara indrindra.
Fa ny an'ny vadinao kosa mieritreritra zavatra hafa. Na, farafaharatsiny, tsy mahita zavatra toa raharaha lehibe izy ireo.
Ary na dia efa nanontany azy ireo imbetsaka aza ianao dia sahirana mifanaraka amin'ny fanirianao.
Angamba tonga ny fotoana hanaiky fa tsy ny fomba fanaovanao zavatra iray ihany.
Azo antoka fa azonao apetraka mahitsy ao anaty vilia fanasana lovia ny serealy anao aorian'ny fampiasana azy, fa avelany ao anaty fitoerany.
Na mety apetrak'izy ireo amin'ny fahitalavitra ny tabilao na dia tsy tena mijery azy aza izy ireo, fa aleonao milamina sy milamina.
Na dia sarotra aza izany, dia mila miaiky ianao fa tsy misy ianareo roa na diso na iray ianareo.
Manana ny fombany izy ireo, manana ny fombanao ianao, ary saika tsy azo ihodivirana ireo hifampikasokasoka tsindraindray.
Tsy afaka manantena ny hanana zavatra foana amin'ny fepetrao ianao. Manana fahazarana ny mpiara-miasa aminao - ny ankamaroan'izy ireo dia efa raiki-pitia mafy ka sarotra vahana.
Mazava ho azy, tsy afaka manantena ny hahazo zavatra foana araka ny fombany koa izy ireo. Mila misy fifandanjana (hiresaka momba izany isika any aoriana).
Zava-dehibe ny mahatsapa fa tsy hianjera ny lanitra raha miala amin'ny fikatonanao mafy ny fiainana ianao sy ny fomba tianao hanaovana zavatra.
Avelao ny vadinao hanao zavatra araka ny fombany indraindray ary jereo fa mirindra tsara ny raharaha.
3. Na, manontania raha mila miady hevitra bebe kokoa ianao.
Rariny loatra ny manantena filàna vitsivitsy ary te ho tanteraka
Fa raha tsy ataonao mazava tsara amin'ny namanao izany, dia matetika no diso fanantenana ianao ary tezitra.
Raha toa ianao ka karazan'olona misoroka ny fifandonana ary tsy dia mahay milaza ny fanirianao dia tonga ny fotoana hitanao ny feonao manamafy.
Raha miahy anao ny mpiara-miasa aminao dia hiezaka araka izay tratry ny heriny izy ireo handraisana ireo zavatra izay manandanja indrindra aminao.
Aza hadino ny milaza fotsiny amin'ny zavatra tena inoanao fa zava-dehibe.
Raha mangataka zavatra toa tsy dia misy dikany loatra ianao, dia mety hahatsapa ny vadinao fa manorisory azy ireo ianao.
Izany no antony ny teboka teo aloha ary ity iray ity dia mila jerena ho iray. Tokony ho fantatrao izay ataonao laharam-pahamehana amin'ny fomba tianao hitondrana ny vadinao.
Fantaro ny fotoana tokony hialana sy ny fotoana hitenenana ary ho re.
Mazava ho azy, ianao koa dia mila mahafantatra tsara ireo filàna sy faniriana asehon'ny vadinao izay mitombina.
Tsy maintsy omena sy raisina.
4. Miezaha mitady fifandanjana tsara kokoa amin'ny fiarahanareo.
Raha ny fahatezeranao amin'ny namanao dia avy amin'ny fahatsapana fa tsy rariny amin'ny andraikitra isan'andro, dia mety ho ny fotoana niresahanao izany.
Tsy tokony hanantena fiovana goavana mandritra ny alina anefa ianao - na dia manaiky aza izy ireo fa misy tsy fifandanjana (ary mety tsy izany).
Raha mahatsapa izao fa 70/30 ny fisarahana dia manandrama mandray dingana kely indray mandeha mba hahatratra 65/35, dia 60/40, sns.
Mety tsy hahatratra fisarahana 50/50 madio mihitsy ianao ary anjaranao ny manapa-kevitra raha afaka miaina miaraka amin'izany ianao.
Toy izany koa ny fihetsem-po…
Raha tsapanao fa manome fanohanana lehibe foana ianao amin'ny alàlan'ny fihainoana am-pahavitrihana sy fanatrehanao ny vadinao, dia mety ho sarotra izany rehefa tsy mamaly izy ireo.
Saingy raha toa ka afaka manatsara ny fanaon'izy ireo izy ireo ary ho eo ho anao matetika (ary tokony hiezaka ny hivoatra izy ireo), ny olona sasany dia tsy mahay fotsiny amin'io karazana zavatra io.
Toy izany koa, raha hitanao fa ianao foana no miala tsiny voalohany na manomboka ny fifanakalozan-kevitra aorian'ny tsy fifanarahana dia mety hanaiky izany andraikitra izany ianao fa tsy hanandrana hanova ny vadinao.
Mety manana olana fototra izy ireo izay manakana azy ireo tsy hampiseho ny fahalemeny - farafaharatsiny mandra-panidin'ny olon-kafa ny mpiambina azy voalohany.
Noho izany, eny, kendreo ny fandanjalanjana tsara kokoa amin'ny zavatra azo ampiharina sy ara-pientanam-po, fa aza manantena fitoviana tanteraka - tsy fahita izany na dia eo amin'ny fifandraisana mahasalama indrindra aza.
Na inona na inona ataonao, aza mitazona isa. Rehefa dinihina tokoa, ekipa ianao fa tsy mpanohitra.
5. Miezaha hanaiky ny lesoka.
Araka ny efa voalaza, tsy misy olona tonga lafatra.
Samy manana ny lesoka daholo isika - mihoatra ny tiantsika hiaiky.
Anisan'ny fananana fifandraisana salama ny fanekena olona noho ny maha izy azy tsy hoe iza no tianao hahatongavan'izy ireo.
Tsy afaka misafidy ny ho tia ny toetra tsara indrindra amin'ny vadinao ianao. Tokony ho tianao tanteraka izy ireo, ny warts ary ny rehetra.
Na tsy matotra ara-pihetseham-po izy ireo, mora tezitra, manadino, tsy mandinika, na zavatra tsy dia misy tambiny firy noho ny faniriana, dia andramo ekena fa anisan'izy ireo izany.
Azo antoka fa azonao atao ny mamporisika azy ireo hiasa amin'ny tenany mba hamahana ny lesoka sasantsasany, saingy tsy maintsy ekenao ireo izay tsy azon'izy ireo hatsaraina.
Mandritra izany fotoana izany dia aza soratana amin'ny toerana ambony.
Raha mora ny mahita ireo lesoka ao amin'ny hafa dia mety ho sarotra kokoa ny mamantatra ireo lesoka ao amintsika.
Raha mampiasa masina kokoa noho ny fieritreretanao ianao dia azo inoana fa hampisaraka ny vadinao ary hiteraka fahavoazana ara-pihetseham-po aminy amin'ny fametrahana ireo tsiny amin'ny olan'ny fifandraisanao aminy.
Tadidio fa te hahatsapa ho ekena ianao amin'ny maha-ianao anao. Ity dia ampahany lehibe amin'ny fisokafana sy mora tohina amin'ny olon-kafa.
Raha tsy azonao ekena ny hafa amin'ny maha izy azy, ahoana no ahafahanao manantena azy ireo hanome izany fahalalam-pomba izany ihany?
6. Diniho ny lafy tsaran'ny vadinao.
Amin'ny fiezahana hanaiky ny kileman'ny namanao dia mety hanampy be ny mieritreritra ny toetra tsara ananany rehetra.
Matetika, ny fahatsapana ankapobeny ny fahatsapanao ny vadinao amin'ny fotoana rehetra dia miankina amin'ny eritreritra mandalo ao an-tsainao.
Rehefa lanin'ny zavatra rehetra tsy vitan'ny namanao izany eritreritra izany dia mahatsapa ho ratsy izy ireo ianao.
Rehefa izany eritreritra izany dia ny zavatra tsara vitan'ny namanao, na ny toetra tianao indrindra momba azy ireo, dia mahatsapa ho tsara ianao.
Ka amin'ireny fotoana ireny mameno ny sainao ny lolom-po, miezaha hamono azy amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny hevitra tsara nomen'ny namanao.
Fantaro ireo zavatra rehetra tokony hankasitrahanao ireo amin'ny fifandraisanao. Ireo zavatra rehetra izay tianao indrindra.
Aza hadino ny mieritreritra hoe 'maninona no manelingelina?' ary 'tsy dia miraharaha ahy izy ireo,' amin'ny alàlan'ny porofo manohitra izay manome anao antony hanelingelina sy hanaporofoana fa miahy izy ireo.
7. Mampihatra famelan-keloka sy fiaraha-miory.
Tadidio fa ny famaritana ny lolom-po dia mitaky fahatsapana ny tsy rariny. Miorina amin'ny fahatsapana fa iharan'ny tsy rariny.
Tsy tokony hahagaga, noho izany, ny mahita fa tena ilaina ny mamela heloka raha tsy tezitra amin'ny vadinao intsony ianao.
Mizara roa ny famelan-keloka. Ny voalohany dia ny manapa-kevitra tsy hamaly faty noho ny zavatra tsy nety nataony.
Izany dia manampy amin'ny fisorohana ny fiakaran'ny lolom-po eo amin'ny roa tonta sy ny fisintahana mifanalavitra noho ny vokatra matetika.
Ny faharoa dia ny lafiny mampihetsi-po izay sarotra kokoa ary mitaky fotoana bebe kokoa.
Fa ho mora kokoa amin'ny fampiharana.
Ny ampahany amin'ny fizotrany dia mitaky fangorahana amin'ny namanao mba hiezahana hahafantatra ny antony nahatonga ilay fihetsika (na manohy mihetsika) amin'ny fomba manokana izay mitarika amin'ny fahatsapana fa tsy rariny.
Mety ho fanamby ny mahita ny mason'ny namanao rehefa tezitra ianao, fa raha azonao atao ny mandinika ny zava-misy sy manontany ny antony nanaovan'izy ireo (na nanao) ny zavatra nataon'izy ireo dia afaka mitondra anao dingana iray akaiky kokoa ny tena izy fahatakarana ary, famelan-keloka, amin'ny farany.
Fa miezaha tsy hieritreritra zavatra lava loatra. Ny famerenana azy ireo ao an-tsainao hatrany hatrany dia hampihemotra ny lafiny fihetseham-po amin'ny famelana heloka.
Lahatsoratra mifandraika: Ahoana ny famelana heloka ny olona: maodely roa mifototra amin'ny siansa momba ny famelan-keloka
8. Ekeo fa sahirana ny rehetra - ao anatin'izany ny vadinao.
Vitsy dia vitsy ny olona tsy manana karazana olana mikorontana amin'ny fiainany.
Ary, raha lazaina ny marina, ny ankamaroantsika dia mihomehezana olana marobe amin'ny fotoana iray.
Tsy mahagaga raha mitolona isika. Isika rehetra.
Rehefa ekenao fa miady ny vadinao koa, dia afaka manampy anao hanapaka kely azy ireo izany ary tsy ho voataona noho ny zavatra ataony na tsy ataony izay manome anao fahatsapana fa tsy rariny.
Ary raha mbola eo ianao dia omeo fotoana fiatoana ho anao ny fahatsapanao ny fomba fanaovanao izany. Azo takarina izany, na dia tsy faniry aza izany.
Raha toa ianao sy ny olon-tianao afaka manam-paharetana kely kokoa sy mifampiara-po fotsiny amin'ny hafa, dia hofongaranao be ireo fahatsapana lolom-po ireo.
9. Miasà ho anao.
Ny vadinao dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fiainanao, saingy tsy manamarina ny fitaomana ara-pihetseham-po avelanao hanana azy ireo aminao izany.
Ka raha tezitra amin'izy ireo ianao na inona na inona antony, angamba azonao atao ny manandrana miasa amin'ny fahasalamanao ara-tsaina sy ara-pihetseham-po amin'ny tanjonao hanana fahaleovan-tena bebe kokoa.
Midika izany fa afaka ny ho loharanon'ny fahasambarana sy fitiavana ianao. Ary tsy ho voakasiky ny ataon'ny olon-tianao ianao.
Tena manampy izany raha tsy misy fihetseham-po na tsy matotra ny vadinao.
Mety tsy ho afaka hiantehitra amin'izy ireo ianao hitombo amin'ny fomba tianao, fa ny asanao samirery dia mety hidika hoe afaka miankina amin'ny tenanao ianao.
Lahatsoratra mifandraika: Ahoana no hahaleo tena ara-pihetseham-po ary hijanona tsy hiantehitra amin'ny hafa ho an'ny fahasambarana
10. Miresaha amin'ny vadinao.
Na iza na iza amin'ireo torohevitra etsy ambony raisinao, dia alao antoka fa mianatra miresaka tsara amin'ny vadinao ianao.
Betsaka ny olona manantena ny ho vitan'ny mpiara-miasa aminy ny sainy. Matetika dia tsy misy dikany izany satria ny olona dia mety ho voafonin'ny eritreriny sy ny olany manokana.
Noho izany dia mila misokatra sy manao ny marina ianao rehefa miresaka amin'ny vadinao.
Raha mahatsiaro ho sorena ianao amin'ny zavatra iray izay efa nataony na tsy nataony dia lazao azy ireo.
Raha miara-manapa-kevitra lehibe ianao, dia lazao izay rehetra mampanahy anao noho ny safidiny manokana. Aza manafina azy ireo hitazona ny fandriam-pahalemana.
Amin'ny alàlan'ny firesahana aloha amin'ireto karazan-javatra ireto dia azonao atao ny miatrika azy ireo sy misoroka azy ireo tsy ho tonga lolompo.
Torohevitra mora ampiasaina dia ny fampiasana fanambarana 'I' rehefa miresaka momba ny eritreritrao sy ny fahatsapanao. Aza mampiasa fanambarana 'ianao' izay mahatonga ny hafa hiaro tena fotsiny.
Ohatra, lazao hoe: 'Mahatsiaro irery aho ary te hiara-hiasa amin'ny faran'ny herinandro bebe kokoa,' fa tsy hoe, 'Miaraka amin'ny namanao foana ianao ary mahatonga ahy hahatsapa ho tsy ankasitrahana izany.'
Ny voalohany milaza ny zavatra tsapanao, nefa manome vahaolana tsara ihany koa. Ny namanao dia tokony hanana antony kely tsy hanaiky ny tolo-kevitrao.
Ny faharoa kosa dia milaza ny zavatra tsapanao, fa izany kosa amin'ny fomba ratsy izay manome tsiny ny vadinao. Tsy dia hamaly amin'ny fomba mandaitra izy ireo.
Rehefa miresaka zavatra mahasosotra anao ianao, dia mety hanampy azy hanaparitaka ny toe-javatra amin'ny fanontanianao azy ireo ny lolom-po mety hitranga aminao.
Amin'ity fomba ity, ianao dia mamolavola ny resaka iray manontolo ho ezaka iraisana handresena ireo olana atrehanao amin'ny fifandraisanao.
Maneho fanekena hanaiky andraikitra ianao ary izany dia ahafahan'izy ireo misokatra kokoa handray ny anjarany ara-drariny.
11. Miresaka amin'ny mpanolotsaina momba ny fifandraisana.
Raha sahirana ianao sy ny olon-tianao hifampiresaka milamina sy tsara rehefa miatrika ny olanao dia mety hanampy ny fananana mpanelanelana amin'ny antoko fahatelo.
Ny fanoroana hevitra momba ny fifandraisana dia mety hanala ny tsindry satria misy olona mihaino ny roa tonta.
Ary raha omena ny fiofanana sy ny traikefany izy ireo, ny mpanolotsaina iray dia mety ho afaka hanome torohevitra mifanaraka amin'ny fomba hanatonana teboka iray miraikitra manokana.
Farafaharatsiny farafaharatsiny, ny fisian'ny olona fahatelo dia afaka manome tontolo iainana ekena kokoa hiresahana.
Rehefa dinihina tokoa, tsy dia manidina firy ianao amin'ny fahatezerana feno rehefa misy olon-kafa ao amin'ny efi-trano iray - olona iray izay tsy ho fantatrao tsara.
12. Aza manao doormat.
Zava-dehibe ny mahatadidy fa ny fifandraisana tsara dia mitaky fanomezana sy fandraisana kely.
Raha tezitra amin'ny namanao ianao satria toa voatsindry mafy ho azy ireo ny mizana dia mila manontany ianao raha mahavita manova ampy izy ireo mba hihena ny fahatsapanao.
Aza avela hararaotina ny tenanao, ary aza miditra amin'ny fifampiraharahana mifampiankina amin'ny code izay andraisanao ny andraikitry ny mpikarakara.
Araka ny fitiavanao ny sakaizanao dia tsy azonao ovaina izy ireo - izy ireo ihany no afaka manova ny tenany, raha tokony hanao izany izy ireo.
Fantaro hoe rahoviana no tena tombontsoanao hamaranana ny fiarahana. Tsy ny fitiavana rehetra no mety haharitra, ary tsy maninona.
Mbola tsy azonao antoka izay hatao momba ny lolom-po tsapanao amin'ny vadinao?Rehefa manana fahatsapana tsy takiana toy izao ianao ao anaty fiarahana dia mety ho sarotra ny mandresy azy ireo irery. Fa tsy mila izany ianao. Na ianao irery na mpivady dia hahazo tombony amin'ny firesahana amin'ny mpanolo-tsaina manana fifandraisana voaofana. Tena afaka manampy amin'ny famonjena ny fifandraisana izay mandeha amin'ny làlan-diso izy ireo.Ka maninona raha mifampiresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hamantatra. Tsotra.
Fomba 7 hifehezana sy hiatrehana ny hatezerana amin'ny fifandraisana
Paikady 12 hampiasaina rehefa mahatsiaro ho tezitra ianao
Fomba 7 hampijanonana ny fifehezana amin'ny fifandraisana
inona no dikan'ny hoe manana toetra matanjaka
ny fomba hanampiana ny hafa sahirana
inona no tokony hataontsika rehefa mankaleo isika
inona no holazaina amin'ny olona tianao
izay tadiavin'ny vehivavy amin'ny lehilahy manambady